Xiaomi CC9 taleefanka casriga ah: ku dhawaaqida khad cusub | TeraNews.net
Xiaomi CC9 casriga: ku dhawaaqida xariiq cusub
qoraaga Tera news La daabacay 02.07.2019
Shirkadda weyn ee Shiinaha waxay mowqif adag ka qaadatay suuqa caalamiga ah soo saarista taleefannada gacanta oo tayo sare leh oo la awoodi karo. Hadana waa waqtigii loo aadi lahaa furdaamooyin cusub. Xiaomi CC9 taleefanka casriga ah, ama halkii khad dhan oo aalado ah ayaa diyaar u ah inuu guuleysto quluubta isticmaaleyaasha.
Khadka cusub ee soo-saaraha Shiinaha ayaa waxaa ka mid ah moodallo: CC9, CC9e iyo CC9 Meitu Edition. Qalabka oo dhan wuxuu ku saleysan yahay Mi 9, ama taa beddelkeeda, waa nooc si buuxda loo beddelay calanka. Iyada oo leh hal farqi - bedelkii processor awood leh oo loo yaqaan 'Qualcomm Snapdragon 855 processor', sheyga cusub ayaa helay Snapdragon 710.
Xiaomi CC9 casriga: faa'iidooyinka
Shiinuhu waa dad la saadaalin karo. Siaomi way ogtahay sida loo badbaadiyo oo aan lumin macaamiisha. CC9 waxay leedahay Mi9 AmoLED 6,39 inch FullHD bandhigay + shaashad oo leh iskaanka sawirka faraha. 600 screen dhalaalaya cd / m2.
Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin is-qiimeyn tayo leh - dhib malahan. Kaameerada ugu weyni waa Sony IMX586 oo leh qaraar ah 48 MP, iyo kamarada hore ee 32 MP oo leh dabacsan F / 1,6. Adabtarada NFC, emitter infakshanka, Hi-Res HD dhawaaqa - jaangooyooyin loogu talagay casriga casriga
Laakiin leh madax-bannaanida, taleefanka casriga ah ee 'Xiaomi CC9' xitaa wuxuu ka fiicnaa calanka Mi 9. Soo-saarehu wuxuu ku rakibay baytar leh awood 4030 mAh. Marka la eego in ay jirto "daciif ah" Snapdragon 710 processor, sheekada cusub ayaa muujin doonta hawlgal muddada fog ah oo hal kicitaan ah.
Xiaomi wuxuu xusayaa in taleefanka casriga ah lagu iibin doono seddex midab. "Sparks qorraxda ee barafka" - sida caddaanka, noocyo kala duwan oo madow ah, iyo kiis buluug ah oo leh calaamado saxeexan. Madaxa shirkadda, Lei Zun, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay qiimaha taleefanka gacanta. Qiimaha ugu yar ee nooca 6 / 64 waa doolarka Mareykanka ee 260. Telefoon gacmeed casriga ah oo leh '6 GB' oo ah RAM iyo 128 flash - 290 $. Qiimaha waxaa loogu talagalay suuqa Shiinaha. Halkan ayaad ka iibsan kartaa taleefan.
Xiaomi Redmi note 9 Pro: sii wadis aan lagu guuleysan
HUAWEI nova 5T: taleefan casri ah oo jaban oo tayo sare leh
Sony Xperia 1 casriga - taleefan caadi ah
Xiaomi Mi 10 iyo Mi 10 Pro casriga ah: dib u eegis, ra'yi
TikTok wuxuu xattaa macluumaadka shaqsiyeed ee taleefannada gacanta
Sida loo daawado Youtube-ka xayeysiis la'aan: PC, smartphone
NUM 2020 - Teranews. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.